‘आस्था राउतले सत्य बोल्या हुन्’ - ट्विटर - साप्ताहिक
Pradeep Raj Joshi@pradeep4845
गायिका आस्था राउत प्रकरणमा हिजोसम्म फ्रन्ट–फुटमा आएर लङ–अनतिर छक्का हान्न खोजिरहेको प्रहरीले अब अचानक ब्याक–फुटमा आएर सट खेल्ने संकेत देखिएको छ । त्यो सट डिफेन्सिभ हुन्छ कि हुक वा पुल हुन्छ, हेर्न बाँकी नै छ !
नबुझेको एउटा कुरा । प्रहरीले कैयौं निहत्था, निर्दोषलाई मारपिट गरेका बग्रेल्ती उदाहरण छन्, त्यहाँ प्रहरीले माफी मागेको देखिन्न । विभागीय कारबाही भएको पाइन्न । आस्था राउत काण्डमा पनि प्रहरी अछुतो देखिन्न । त्यहाँ पनि ती अफिसरको गतिविधि शालिन पक्कै छैन, र पनि प्रहरीको यत्रो दम्भ ?
आस्था राउतले लाइभ भिडियोमा बोल्दा अलि विचार पुर्‍याएर बोलेको भए किन अहिले माफी माग्नुका साथै देश निकाला भए जसरी भारतको सिक्किममा नै लुकेर बस्नु पथ्र्यो त । पूर्खाहरूले त्यतिकै भनेका होइनन्, मान्छेले कि थुतुनो कि त कुन्नी के जाती जोगाउनुपर्छ भन्छन्, सही रै’छ ।
Krishna Hari Upadhya@hari_upadhya
दीपक मनाङ्गेको झापड, आस्था राउतलाई कारबाही गर्न सक्रिय नेपाल प्रहरीकहाँ छ ?
कास्की एन्फा अध्यक्षलाई मञ्चमा कुट्ने दीपक मनाङ्गेलाई कारबाही हुन्छ त भन्नेमा ठूलो शंका–उपशंका आमजनतामा उब्जिरहेको छ । अपशब्द बोल्ने आस्था राउतलाई जस्तै पक्राउ पुर्जी काटिन्छ कि अपराधीको नाम लिँदा पनि हातपाउ फुलाउँछ । प्रशासनको क्षमतालाई सूक्ष्म रूपमा हेरिरहेका छन् आममानिस ।
गायिका आस्था राउतको गल्ती देखाए यतिबेला नेपाल प्रहरीलाई ठूलै अपराधी पत्ता लगाइयो भन्ने लागिरहेको होला । मानौं निर्मला काण्ड र ३३ किलो सुनकै नाइके समाइयो जसरी ।
चौबन्दीमा पटुकी बाँध्या छैन भन्दैमा, मलाई तँ भन्न कहाँ पाइन्छ ? पखेरीमा घाँस काट्न जान्या छैन भन्दैमा, मलाई चेकजाँच गर्न कहाँ पाइन्छ ? म त कफी र ज्याकेटलाई माया गर्ने नेपालकी छोरी, मलाई विमानस्थलमा ज्याकेट खोल भन्न कहाँ पाइन्छ ?
Dilli Mani Bhattarai@DM_Bhattarai
आस्था राउतसँगको साधारण भनाभनमा पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने प्रहरी सांसद दीपक मनाङ्गेलाई कस्तो व्यवहार हुन्छ ?
आस्था राउत हक्की स्वभाव...विमानस्थलमा उनले गल्ती गरिन्...तर प्रहरीले अनावश्यक ताण्डव गर्दैछ ।
सामाजिक पुँजी भएको व्यक्ति र संस्था जब बोल्छ, सामाजिक नैतिकतासम्बन्धी कसुर थर्किन्छ । नेपाली सांगीतिक दुनियाँका हरिबहादुर राउत बोले, आस्थाबारे तिम्रो कानुन थरथरी काम्छ । हिजोको जस्तो धारा, दफा, उपधारानै नियाल्ने दिन गए । हामी राणाकालीन शैलीमै छौं ।
उखु किसानले भुक्तानी पाए ? मेडिकल माफियाले विद्यार्थीलाई पैसा फिर्ता गरे ? यस्ता घटनामा मौन छ सरकार, तर आस्था राउतलाई पक्राउ गर्न तयारी अवस्थामा छ । लाग्छ उनले ठूलै अपराध गरेकी छिन् ।
प्रहरीको व्यवहार बुझिसक्नु छैन । के साँच्चै आस्था राउतमात्रै गलत हुन् त ?
आस्था राउत जस्तै लाखौं यात्रीले यात्रा गर्दा प्रयोग हुने विमानस्थल जस्तो संवेदनशील ठाउँको सुरक्षा घेराको सीसीटिभी फुटेज किन सार्वजनिक गरियो ? जवाफ कता खोज्ने ?
नेपाल प्रहरीलाई अभद्र व्यवहारको कानुनी व्यवस्था राम्रो हतियार भएको छ जे होस् । प्रहरीले पक्राउ गर्ने भनेपछि आस्था राउत भन्ने कस्तो कलाकार रहिछिन् ?
आस्था राउतलाई जेल हाल्ने, गाली गलौज सन्दर्भमा अनि हत्याको अभियुक्त लागेको सभामुख । हाहाहा कति हाँस्नु । ३३ किलो सुनको फुटेज भिडियो देख्ने सौभाग्य कहिले मिल्ला त ?
हर व्यक्ति न्यायाधीश अनि हर व्यक्ति डाक्टर हुने देश नेपाल नै त होला नि, कि अन्त पनि अरू कुनै छ ?
एयरपोर्ट काण्डमा बोल्नु जरुरी नै ठानेको थिइनँ । तर, केही उद्वेगात्मक टिप्पणीहरू हेरेर, सुनेर, पढेर आजित भएँ । दिमागमा केही प्रश्नहरू आए र यहाँ पेश गरेँ । हरेक दिन देशमा कति मानिसहरू प्रहरी वा अन्य बर्दीधारीहरूको विभिन्न प्रकार र तहका दुव्र्यवहारमा पर्छन् होला ?
केही आस्था नजान्नु भएकी राउतलाई दुई–चार घण्टा प्रहरी चौकीमा राखेर माफी मगाएर छोडेको भए हामी नेपालीहरू पनि अलि सुध्रिन्थेउँ कि ? साह्रै बिग्रिएका छौं हामी ।
कुनै–कुनै सुरक्षाकर्मी रुखो हुन्छन् । एकाध रुखो दम्बी प्रहरीलाई लिएर सिंगो संगठनलाई रोष प्रकट अशोभनीय कार्य गर्नुहुँदैन थियो आस्थाले । राष्ट्रसेवक प्रहरीले पनि तुच्छ वचन नगरेर साधारण शब्दको प्रयोग गरेर आफ्नो डिउटी गरेको भए आस्था राउत र महिला सुरक्षाकर्मी काण्ड भाइरल हुने थिएन ।
सर्वसाधारणप्रति प्रहरीको रुखो व्यवहार त प्राय: सबै नागरिकले भोगेकै हुन्छन् । जब–जब उनीहरूको व्यवहारविरुद्ध जनमानसले आवाज उठाउँछन्, तब–तब प्रत्येक नागरिकलाई आस्था राउत बनाइन्छ र उनीहरूको बली चढाइन्छ ।
मलाई एकदम मनपर्ने गायिका आस्था राउत, बोल्ने शैली सुधार्नु होला । बोल्ने शैली चित्त बुझेन । कर्तव्य पालना गरेका हुन् पुलिसहरूले, दुव्र्यवहार होइन ।
विमानस्थलमा सरेआम गलहत्याउँदै हातपात गर्ने पारस शाहविरुद्ध उजुरीसम्म गर्न नसक्ने प्रहरी त्यहाँ चेकजाँचको क्रममा प्रहरीको व्यवहारप्रति सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोख्ने आस्था राउतविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्छ ।
खासमा आस्था राउतले सत्य बोल्या हुन्, अब सुध्र नेपाल प्रहरी ।
नेकपामा तँ भनेर सम्बोधन गर्न नपाइने रै’छ, भनेसी आस्था राउत दिदी कांग्रेस रै’छिन् हैन्त ?
आस्था राउतमात्र होइन, कसैलाई पनि यसरी पुस–माघको जाडोमा ज्याकेट खोल्न लगाउनु चैं हुन्थेन के ।
अहोरात्र १६ घण्टा ड्युटीमा खटिने प्रहरीलाई नहेप भन्ने सबक सिकाउने अस्त्र हो आस्था राउत काण्ड ।
आस्था राउतको सीसीटिभी फुटेज बाहिर आयो, तर ३३ केजी सुन बोकेको गोरेको सीसीटिभी फुटेज किन बाहिर आउँदैन सरकार ?
आफ्नो छोरा–छोरीलाई त तँ भन्न नमिल्ने सरकारले उर्दी जारी गर्ने पार्टी छ । उता आस्था राउतले फेसबुक लाइभमा अरूको छोरीलाई तँ भनेपछि कहाँ छोड्न मिल्छ त ?
पुलिसले पक्राउ गर्ने भनेपछि आस्था राउत भन्ने कस्तो कलाकार रहेछिन् ? उनको हिट गीत कति रहेछन् ? बुझ्न गुगलको सहायता लिँदैछु । यो घटनाले नेपाली कलाकारहरू कस्तो धरातलमा छन् ? प्रष्ट पारेको छ ।
वेलकम सर, म झोला हेर्न सक्छु ? यहाँको शरीर चेक गर्न सक्छु ? बोर्डिङ पास हजूर † शुभयात्रा सर † सुर्खेत एयरपोर्टको यात्रु सेक्युरिटी जाँचमा बसेका प्रहरी जवान पुस्कर भट्टका यी शब्दसहितका व्यवहारले आश्चर्यमा पार्‍यो । यो पो हो त प्रहरी हाम्रो साथी भन्ने व्यवहार ।
यो हप्ता : सुरुवाततिर मुटुबारे विभिन्न कोणबाट धेरै कुरा जान्ने–सुन्ने मौका पाइयो । आस्था राउतको पर्फमेन्स हेर्दा भने गायनमा भन्दा अभिनयतिर उनको भविष्य उज्जवल छ जस्तो लाग्यो । झरीले एन्डिङमा स्वाद भर्दियो । एमसीसी र नेमप्लेटले पनि हल्का मार्केट चाहिँ लेकै हो बिच्च–बिच्चमा ।
उ बेलाका साझा बसरका सह–चालकका कुरा : साझा बसमा उ बेला पाकेटमारा बहुत सक्रिय हुन्थे । एक पटक एउटा प्रहरीको पाकेट मारिएछ १० रुपैयाँ । बस पुलिस थानामा रोकियो । बसमा यात्रा गर्दै गरेका परिचित चार पाकेटमारले जनही १० रुपैयाँ तिरेका थिए रे ।’ नोट: बर्दीमा रहेकोलाई नचलाउनुस् ।
गायिका राउतलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुर्‍याइयो
आस्था राउतलाई ४ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिने
आस्था आफैं पुगिन प्रहरी कार्यालय